Shabaabkii weeraray Amisom Oo nolosha lagu qabtay iyo Faah-faahin kale - Daawo - iftineducation.com
iftineducation.com – Akhbaar kasoo baxay taliska ciidamada midawga Africa ka jooga Soomaaliya ee Amisom oo looga hadlay faaafaahinta weerarkii Al-Shabab shalay galinkii dambe ku qaadeen xerada Xalane ayaa waxaa lagu sheegay in dhankooda ay uga geeriyoodeen 3 askari iyo ruux rayid ahaa oo la shaqaynayay.
Ciidanka Amisom waxaa ay sheegeen in xerada Xalane ay galeen dabley ku labisnaa dharka ciidamada dawlada Soomaaliya iskuna dayeen inay tagaan meelo muhiim ah hase ahaatee laga hortagay sida warka ku qoran.
War saxaafadeedkaan taliska AMISOM kasoo baxay waxaa lagu sheegay in wadarta tirada dadka ku geeriyooday weerarkii shalay oo 9 ruux gaaraysa in 5 ka mid ah ay ahaayeen dablaydii xerada weerartay, 3 askari oo amisom ka tirsanaa iyo ruux rayid ah halka nolosha lagu qabtay qaar ka mid ah kooxdii weerarka gaysatay.
Askarta Amisom ma aysan shaacin wadamada ay u kala dhasheen askarta weerarkaan kaga geeriyootay.
Wariye Daauud Aweys oo lagu wado in loo magacaabo Afhayeenka …